Global Voices teny Malagasy · 5 Novambra 2018
Tantara tamin'ny 05 Novambra 2018
Afrika Mainty05 Novambra 2018
Azia Atsimo05 Novambra 2018
Fehin'ny Bilaogy tao Azia Atsimo tamin'ny Oktobra 2005.
Ghana05 Novambra 2018
Bangladesh: Ireo mpampihorohoro sy ireo Mpiray Tsikombakomba Hafa
Manome ny fomba fijeriny ireo fiaraha-miasa ara-pôlitika ao Bangladesh i Adda, ary mba hanipihany ny fitovian'ny zavamisy, manontany izy raha mety hanaiky hiara-hiasa amin'ireo mpampihorohoro nanafika azy i Etazonia.
Japana05 Novambra 2018
Efa Nivoaka ny Rakipeo tao Madrid
Isaorana i Gohsuke Tanaka tamin'ny famoahany ilay rakipeo avy amin'ny firaketantsika ny Aterineto nandritra ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny Demôkrasia, ny Fiarovana ary ny Fampihorohoroana.
Ny Sangin'i Isaac Mao Tamin'ny Fetin'ny Lainga
Azia Atsinanana05 Novambra 2018
Milazalaza ny momba ilay sangy nataony tamin'ny mpitandro ny filaminana anaty aterineto nandritra ny Fetin'ny Lainga i Isaac Mao.
Fampahafantarana an'i Peter Tan
"Sinoa Maleziana Katôlika Romana aho, teraka sy nobeazina tao Penang, efapolo taona latsaka, niharan'ny ratra ny tsokan-damosiko tamin'ny faha-18 taonako, tsy afa-mihetsika manomboka eo amin'ny tratrako ka hatrany ambany ary iharan'ny aretin'ny voa miverimberina aho. Mitantara ny fiainako, ny eritreritro ary ny fomba fijeriko ity bilaogy ity", hoy izy.
Serdal: Bilaogera Arabo mpisava lalana avy ao Emirà Arabo Mitambatra
Nilaza i Al-Muahairi, aka Serdal fa nanomboka ny bilaoginy izy satria nieritreritra fa tsy toerana tsara ho azy hamoahana ny heviny intsony ny forums ary te hanana tranonkala tokana ahafahany mametraka izay tiany holazaina izy.
Nanambara ilay Iraniana bilaogera monina ao Toronto, Hossein Derakshan, aka Hoder fa hiverina any Iran amin'ny herinandro ambony izy, na dia eo aza ny loza mety hitranga aminy.